St. Kitts & Nevis Curfew: Government Declares Immediate 24-Hour Curfew | Safety
Ikhaya » Ukhuseleko loKhenketho noNgxamiseko » I-St. Kitts & Nevis Curfew: URhulumente uxela uMzuzu we-24 ngeyure ngokukhawuleza
I-St. Kitts & Nevis Curfew: URhulumente uxela uMzuzu we-24 ngeyure ngokukhawuleza
Matshi 31, 2020
Ngaphantsi kwe- new St Kitts & Nevis ixesha lokufika ekhaya, imeko yangoku yemo kaxakeka irhoxisiwe kwaye umgaqo omtsha uqalile ukusebenza kwiziqithi apho kungekho mntu ngaphandle koMkhosi woKhuseleko kunye nabanye abaSebenzi boKhuseleko, amaGosa oKhathalelo lwezeMpilo, amagosa ezobuchwephesha kwezobuchwephesha bezinto ezibandakanya umnxeba, kunye nabasebenzi beendaba, baya kuvunyelwa ukuba baphume kwiindawo zabo zokuhlala.
Ukusukela izolo ngokuhlwa, nge-Matshi 30, 2020, iNkulumbuso yaseSt. Kitts kunye neNevis uGqr. UTimothy Harris ubhengeze ukuba, ukuqala nge-7: 00 pm ngolwe-Lwesibini, nge-Matshi 31, 2020, ukuya kwi-6: 00 kusasa ngolwesiHlanu, ngo-Epreli 3, 2020 ixesha elipheleleyo leeyure ezingama-24 eligcweleyo.
Le yinxalenye yempendulo kaRhulumente kaRhulumente yokulawula kunye nokulawula intsholongwane ye-COVID-19 kunye nokunciphisa ingozi kubantu bayo ngokuthintela ukusasazeka kwintsholongwane kumntu omnye ukuya kolandelayo.
Ukusukela izolo, nge-30 kaMatshi, bekukho iimeko eziyi-8 eziqinisekisiweyo ze-COVID-19 kwi-Federation. Eli lixesha elingazange labonwa ngaphambili kunye neengozi ezijamelene ne-Federation zifuna ukuba uRhulumente athathe amanyathelo abalulekileyo okujongana nokoyisa lo bhubhane. La manyathelo aluqilima akhoyo kweli xesha lichaziweyo kwaye uRhulumente uyakuqhuba evavanya kwaye elungisa amanyathelo afunekayo njengoko kufanelekile kwimeko.
Indawo yeqhinga le-Saint Kitts yenze ukuba ibe yindawo eshushu yobukoloniyali kunye nendawo ekugxilwe kuyo kumazwe aseYurophu kumzabalazo wabo wokulawula amandla kwiziqithi ze-West Indies. Iminyhadala, ubugcisa kunye neminye imiboniso yelo siko yenye yezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi ngoku, njengoko kunjalo ngamanxuwa amasimi amaninzi. Imbali yembali yeziqithi iyabonakala kwintsalela enomtsalane kwaye igcinwe kakuhle yeBrimstone Hill Fortress. Zombini ipaki yesizwe kunye ne-UNESCO yeLifa leMveli yeHlabathi kwaye inikezela ngemibono emangalisayo kwindawo ejikelezileyo nakwiziqithi ezikufuphi. Kuphela ngamanxuwa ambalwa kunye nezinye iidonons ezihlala eFort Charles kwiNevis, iinqaba zaseCharlestown.
Ngolwazi oluthe kratya kwi-COVID-19, nceda undwendwele www.who.int/emergency/diseases/novel-coronavirus-2019, www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html kunye / okanye http://carpha.org/What-We-Do/Public-Health/Novel-Coronavirus.